III Ukutshintshiselana kwamava eCadastre, uBhaliso kunye nokuBakho koMhlaba-Impembelelo yokuqala-eGeofumadas
III Ukutshintshiselana kwamava eCadastre, uBhaliso kunye noMiwo mhlaba -Uluvo lokuqala
Ngo-Okthobha, 2015 cadastre
Xa usuku lwesibini kwiintsuku ezintathu lubandakanyekile kumhla obekiweyo kwilinge leNtlanganiso yaMazwe ngaMazantsi noMzantsi ibanjwa, eGranada, eNicaragua. Nalu uluvo lwam lokuqala.
Ngaphandle kwamathandabuzo, kwabo bangaveli eNicaragua, amava okusingqongileyo anefuthe eliphezulu. Iqondo lobushushu kunye nokubila okuphuma ngaphandle kwe-AC kuyaphambana, kodwa indawo iyamangalisa.
IGranada yasekwa kwi-1524 nguFrancisco Hernández de Córdoba. Yeyona dolophu indala eNicaragua kwaye sesinye sezona zixeko zokuqala kwimimandla yezwekazi laseMelika. Ngokungafaniyo nabanye abantu ababanga into efanayo, isixeko saseGranada yayingengobemi beloyiso kuphela, kodwa yayikwisixeko esibhalisiweyo kwiirekhodi ezisemthethweni zoMqhele waseAragon kunye ne-Kingdom of Castile eSpain.
Imiqathango yokhuseleko loluntu, intlonipho yam. Iiyure ezimbalwa zobusuku, ukukhotha iminwe yakho. Ukuthandana kwexabiso lezembali kunye nenkcubeko, njengakwinqaku elithile lombongo kwi udidi lokuzonwabisa.
Indlela yokusebenza kunye nosuku
Iyasebenza kwaye iyasebenza xa kunokwenzeka. Nangona ngaphezulu kuxhomekeke kubuchule kunye nobuqili bemodareyitha. Unomdla ngeZithuba eziVulekileyo, apho ungabelana ngezihloko ezithile kunye nabo babhalisela iiphaneli; nangona kwimixholo endiyibonileyo ndinoluvo lokuba ziphindaphindeka ngokubhekisele kwezi zangaphambili.
Uhlobo lwentetho kunye neeforamu zilungelelanisiwe, nangona zixinene kangangexesha apho kungekho sithuba saneleyo sokubonisa okanye senkqubo-iyaqondakala. Ngokuqinisekileyo iyazaliswa ziincoko zangasese, kuba amava angaphezulu kwexabiso, nabathathi-nxaxheba baseGuatemala, eMexico, e-El Salvador, eNicaragua, eHonduras, kwiRiphabhlikhi yaseDominican, eCosta Rica, eColombia, ePeru, e-Uruguay, eMacedonia, eUnited States kwaye mhlawumbi izibini ezingaphezulu endizilibalayo ngoku.
Usuku lokuqala luzilungiselele ngokwendlela eqhelekileyo kwaye wamkelekile kwilizwe elinomgaqo oluchanekileyo kumgaqo-siseko.
Ukusuka kwiintetho eziphambili; Ukuboniswa kuka-Diego Erba, "Ukubaluleka koLwazi lweCadastral kulungelelwaniso" yinto engachazekiyo kwaye inobutyebi obukhulu bemifanekiso; Ukongeza kwimvakalelo yakhe elungileyo yokuhlekisa, izigqibo azenzileyo ekuqaleni ziyakhuthaza.
UVictor Endo ubonakalisile amava kuHlanganiso lweSizwe.
UDarío Gómez unxibelelwano phakathi kweRegistry kunye neCadastre
Ngosuku lokuqala i-axis ye-thematic ibeyindlela yokulungelelanisa, ngalo mhla wesibini ukuphuculwa kunye nokudityaniswa kweRegistry kunye neCadastre kwaye ngomso iya kuba kukubeka iliso kunye novavanyo lweenkqubo zolawulo lomhlaba. Apha kuzakubakhona imiboniso efana neZikhokelo zokuziThandela kuLawulo loMhlaba kuLatin America, nguJavier Molina.
Ngaphandle kobutyebi benkcazo-ntetho kunye notshintshiselwano, emva kokuzimasa iminyhadala emibini edlulileyo, ndingachonga ezi zinto zilandelayo ezinokuthi ziphucule:
Ukulawulwa kolwazi olusebenzayo kungxamisekile. Bambalwa abanombono wokuba ucwangciso lwawo onke amava ekwabelwana ngawo luphela njani, indlela yokufikelela kubo, indlela yokuyiphindaphinda kunye nendlela yokuphinda ubabuyisele olu lwazi; Ngokucacileyo kule meko imixholo yolawulo lwentando yesininzi iyavela kwinqanaba lamaziko oluntu.
Umona wolwazi usabonwa. Ezinye zeentetho zisabonakala ngathi ziza kwabelana ngamava amnandi kuphela, kwaye nangaphezulu kwesinye senza ukuba kubonakale impumelelo yelizwe, iprojekthi okanye umcebisi wabucala. Nangona ukusuka kweyokuqala, kukho inkqubela phambili kule nkalo.
Ubutyebi bolwazi, ubuhlwempu kwizigqibo. Ukuhamba kumasebe kusabonakala, ngokweetekhnoloji, iinkqubo, iindlela zokupheka zomlingo kwaye uziva ukuba into eluncedo komnye umntu inokuba luncedo kum "kodwa imeko yabo yahlukile." Akuthandabuzeki ukuba ingxaki iyaqondakala ngokwenene kumthombo wayo. ZONKE iingxaki zobhaliso kule meko ziyafana, ZONKE iingxaki ze-cadastre kule meko ziyafana; umahluko uyafikelela, kodwa ingxaki iyafana. Ewe isisombululo sikhethekileyo kwilizwe ngalinye kwaye banamanqanaba enkqubela phambili, kodwa andiboni umbono oqinisekileyo kwimigaqo yesisombululo eFanayo ngokufanayo kwaye ingabandakanyi ukuphinda kuvulwe ivili.
Akukho mzekelo wokugqibela wokubonisa imeko. Ndibona imibono eyahlukileyo yokuba le mveliso iyintoni. Kubonakala kum ukuba kukho ukunqongophala kweentetho eziqinisekileyo, uninzi lwazo olunokuthathwa kwiiforamu ekupheleni kweziganeko. Imiba efana:
-Ubhaliso, i-cadastre kunye nokudityaniswa kwayo akupheleli, zizindlela zokukhuthaza ukukhula nentlalontle yomsebenzisi wokugqibela.
Obuchwephesha banamhlanje abunyanzelekanga, ukubekwa emgangathweni kweenkqubo (kwiphepha) kunjalo.
-Ukwenziwa ngokutsha kwerejista kunokwenziwa njenge-maquila kwaye kulula kakhulu; Ubukho benkqubo kunye notshintsho lwenkcubeko kubasebenzisi ekusebenzeni ngokuqhubekayo ngumceli mngeni apho kufuneka utyalomali khona.
-Udityaniso lobhaliso-lwecadastre alunakufuna utshintsho kumthetho, nokuba kungangumgaqo wenkqubo. Kodwa kukho iindlela zelinye ilizwe ekufuneka ziqwalaselwe ngokutsha okanye zilungiswe ngobundlongondlongo, ezinje ngala: Ukudityaniswa kweziko elilawulayo njengeambrela, ukuqokelelwa kwedatha esisiseko ngoorhulumente basekhaya, ukuhlaziywa ngabasebenzisi ngokutshintshiselana. izikhuthazi ezinje ngesaphulelo kwintlawulo yeerhafu, ukudityaniswa kwemigangatho yamanye amazwe yolawulo lwamalungelo epropathi.
Kwicala lethu, ukwamkelwa kweNkundla ePhakamileyo kunye neGqwetha Jikelele leRiphabhlikhi yaseCandandante Ortega, ukulungiselela umbutho kunye nobushushu besiganeko. Kubathathi-nxaxheba, ukuvuyisana nokukhethwa ukuba bafike apha, umbulelo ngokwabelana ngolwazi oluninzi kwiindawo ezahlukeneyo. KwiBhanki yeHlabathi kunye ne-FAO, bravo! yokukhuthaza eli nyathelo kulawulo lolwazi oluzinzileyo; kodwa kunye nomceli mngeni kumanyathelo alandelayo okuthintela ukwenziwa okulula kwezigaba ezitsha ngokuqhubeka nokwenza okufanayo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iindaba zeBentley Latin America Newsletter
Post Next Iikhosi ezi-5 ezikwi-Intanethi zeCadastre- zinomdla kakhuluOkulandelayo »